fursad New in la xoojiyaa deriskiisa 7/12! | Holmbygden.se
OBS! Ogeysii tacsi u thomas.aslin@sundsvall.se
(haddii aadan hore u sameynin via HBU)
Qaado fursad on Monday at. 18 (goobta lagu dhawaaqi ka dib) tababar u socday si ay u noqdaan wax-u deriskiisa xoojin. Ka dib tababarka, kartaa inaad shil ku Holm si toos ah heli SMS ka SOS. Waxaad lahayn waajibaadka gaar ah ama xuquuqda iyo in this, laakiin haddii aad awood u leedahay iyo caawin! Taas oo run ahaantii samayn kartaa isbedel ee haddii qaraabadaada, deriskaaga ama qof kale oo u dhow si ay u noolaadaan!
Tan iyo bilowgii mashruuca 2013 waxa uu ahaa 11 alarm ee Holm iyo ku dhowaad dhammaan waxa ka mid ah ayaa iskood wax ka hor inta adeegyada ambalaaska iyo xaaladaha degdegga ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaan u baahan nahay in ay noqon ka badan oo ku yaala degmada Holm, oo doorbidan jejebinta yar agagaarka Holmsjön. In xaaladda hadda jirta waa sida. ninna dhinaca koonfureed ee Holmsjön ama Vike, Loviken, Sandnäset, Kväcklingen, Österström iyo rabitaan. Ma aqaan qof kasta oo kale oo aad u malaynayso in laga yaabo in ay xiiso u qabto iyo adiga kugu haboon. U sheeg!
Tababarka ayaa waxaa soo agaasimay Medelpads Ururka Badbaadinta iyo waa bilaash. Holm, oo ay la socdaan a meelo kale oo yar oo Medelpad oo keliya ee Sweden in la keentay kartaa isla markiiba in sidan ee shilalka kala duwan.
tababarka waxaa ka mid ah:
Tuurida shil gaadiidka
Heart- & Kicinta la AED
Inta badan falalka fudud oo muhiim ah – Waxa ugu muhiimsan waa si dhakhso ah u sameeyey. Taas ayaa ka dhigaysa nidaamka ay muhiim p.g.a Holm xaq u. in shil inta badan ku saabsan yahay. 20-60 daqiiqo ka soo adeegyada ambalaaska iyo samatabbixinta ee kuugu dhow.
MA OGTAHAY Holm Defibrillators u gaar ah!?
Faahfaahin dheeraad ah oo la arko sheekada on deriskiisa xoojiyaa on holmbygden.se/akut (helay si fudud iyada oo loo marayo “ ” sare ee bogga guriga).
K ontact su'aalo:
Medelpads Association Samatabbixinta
Thomas Åslin, Dabka Isbatooraha / Inner Chain
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan mashruuca (fr. 2012), Riix halkan.Close.
Dadka meelaha miyiga ah ma lagu tagi karaa isla heerka ilaalinta shilalka sida dadka ku nool meelaha magaalooyinka ah. waa in muwaadiniinta degmada leeyihiin "ilaalinta siman" shilalka iyo mashruucan dooni inuu ka fiican gaari Ujeedada this.
meelaha baadiyaha ah waxay leeyihiin difaac yar shilalka badan meelaha magaalooyinka ah, halkaas oo weyn- iyo Ciidamada degdeg ah oo ku salaysan meelaha ay mugga dadweynaha sare. Aan ka hortagga dheeraad ah iyo awood kartida bulshada rayidka ah si ay u bet ugu horeysay si aan gaadhay qaybo ka mid ah sharciga ku saabsan ka hortagga shilalka.
ilaalinta Better shilalka baadiyaha iyada oo taageero qofka.
In la sameeyo fikradda ah ilaalinta shilalka ee miyiga. Fikradda dul garanaya ah shilalka ugu ceeb in miyiga iyo tallaabooyinka (la-talinta, macluumaad, kormeerka iwm) si loo yareeyo iyo maarayn kuwan. fikrad fikradda la joogo, waayo, Management MRF October ee la soo dhaafay 2012.
channels Raadinta oon waxbarashada iyo macluumaadka la nidaamsan shaqeeya kartaa, oo kuwaas ka heli dadka doonaya in ay noqdaan "dad ammaanka" maxalliga ah (fiirso magaca ugu ah dadka). Tirada waxay ku xiran tahay danta iyo size ee bulshada
Inta lagu guda jiro October-December 2012, fuliyo duuliye on fikradda ah ugu yaraan 3-5 bulshooyinka meelaha magaalooyinka ah ee reer miyiga.
January-February 2013, qiimeeyaan mashruuca iyo kartida si loo horumariyo shaqada geedi socodka a waarta oo ka mid ah MRF iyo FIP ka shaqaalaha degmada buuxin kartaa ilaalinta shilalka. qiimeynta waa in ay sidoo kale waxaa ka mid ah waxaa macquul ah gambaleelka ama SMS sida in loo soo diri karaa "ayuu dadka ammaanka" iyo sidoo kale fursad ay ku soo bandhigto in dhowr goobood oo ka dib markii lagu heshiiyey qodobada looga baahan yahay (tus 30 My qaaraan si ay hawsha dab degaanka). shaqo ayaa la soo ururiyey ee warbixinta oo soo bandhigay in ay kooxda maamulka MRF February ee la soo dhaafay 2013.